संसद बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक : कहिले बोलाउलान् त ? Nepalpatra संसद बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक : कहिले बोलाउलान् त ?
काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी फागुन २२ वा २३ गतेभित्रै संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारीमा गरेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि पहिलोपटक साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका छन् ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार आगामी फागुन २४ गतेभित्र संसद बैठक बोलाइसक्नुपर्ने छ ।
१३ दिनभित्र बैठक बस्नुपर्ने परमादेशसहित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेकोले सो समय-सीमाभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक दवाव छ । संसद बैठक कहिले बोलाउने भन्ने वारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको हुनसक्ने आंकलन हर्न सकिन्छ ।
हिजो साँझ मात्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओली अचानक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास गएका थिए । आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
संसद बैठक आव्हान भइसकेपछि विपक्षीहरूको भुमिका हेरेर थप रणनीति बनाउने ओली पक्षको तयारी रहेको सो पक्षका नेताहरुले बताएका छन् । शुक्रबार ओलीले बालुवाटारमा आफु निकटका नेताहरूसँगको भेटमा पार्टीभित्र समस्या रहेको भन्दै आफुले मुलुकको स्थायित्व र विकासका काम गर्न खोज्दा नदिएको भन्दै अब आउने चुनौतीलाई फेस गर्दै जाने बताएका थिए ।
संसद बैठक बसेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन खोजेको प्रचण्ड-नेपाल समूहको नेकपाले प्रस्तुत गर्ने रणनीति अनुसार अघि बढेर प्रतिवाद गर्ने रणनीति पनि ओलीले बनाएका छन् । राजीनामा दिन चौतर्फी नैतिक र राजनीतिक दवाव बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा के आकस्मिक निर्णय गर्नसक्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली कुनै हालतमा राजीनामा नदिने मनस्थितिमा भएको बताउदै आएका छन् ।